CS : CyberSansar.com - रोजिनाले डेट गर्न पाउँदा...
रोजिनाले डेट गर्न पाउँदा...
21 August 2008-Thursday
तिमी कत्तिको रोमाञ्चित छौ ? यो प्रश्न भुइँमा नपुग्दै टपक्क टिपेर भर्खरै बीबीएस अध्ययनरत रोजिनाले भनिन्- "एकदमै ! तपाइँले यो एक्साइटमेन्ट मेरो आँखामा हेरेर चाल पाउन सक्नु हुन्छ ।"
हुन पनि गायक सुजील कर्माचार्यजस्ता 'क्युट' र हत्तपत्त बजारमा नभेटिने गायकसँग केही घण्टाका लागि हिमचिम गर्न पाउनु उनका लागि मरिहत्ते गर्ने 'फ्यान'हरुका लागि सुवर्ण अवसर नै हो । त्यसैले त साइबरसंसारडटकमले आयोजन गर्ने गरेको 'सेलिब्रिटी डेटिङ'मा गायकहरु झुल्किने बित्तिकै सयौँ युवतीहरुको इमेल स्याउँस्याउँती आइपुग्छन् ।
यस्तै अवस्था रह्यो, रोजिनाको पनि ! उनी हेटौँडामै जन्मिएर हुर्किएकी हुनाले हेटौँडाबाटै काठमाडौँमा स्थापित भएका गायक सुजीललाई भेट्नु साँच्चिकै रोमाञ्चक क्षण थियो । उसबेला हेटौँडामा भेट्ने अवसर नजुरेको उनलाई यहाँ डेटिङमा भेट्ने अवसर पाउनुलाई एउटा गौरवपूर्ण क्षणका रुपमा लिइरहेकी थिइन् ।
यता सुजीलका लागि पनि रोजिनासँगको भेट कम्ता रोचक रहेन । किनभने गायकलाई भेट्ने बित्तिकै रोजिनाले 'दाइ' भनेर अँगालो हालेकी थिइन् । भर्खरै उब्जिएकी बहिनीबाट प्रभावित भएका सुजीलले रोजिनाको खुलस्त व्यवहार, हाँसिरहने बानी र ट्यालेन्टबाट औधि प्रभावित हुँदै मोडलिङ गर्न सुझाव पनि दिए । रोजिनाले पनि जवाफमा भविष्यमा मिल्यो भने मोडलिङ पनि गरिएला नि दाइ भन्दै थिइन् ।
साइबरसंसारको टिमका लागि यो डेटिङ एउटा फरक अनुभूतिको थियो । किनभने यस पटक बेकरी क्याफे टेकुबाट पूरै टिम सुनधाराको बेकरी क्याफे पुगेको थियो । र, त्यहाँको शान्त वातावरणमा यस पटकको डेटिङको मज्जा बेग्लै अनुभव गरिएको थियो ।